शिवरात्रिमा पशुपतिमा नागाबाबाको भीड किन ? - News Portal of Global Nepali
शिवरात्रिमा पशुपतिमा नागाबाबाको भीड किन ?
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष शिवरात्रिमा पशुपतिमा नागाबाबा आउँछन् । ती नागाबाबालाई हेर्नेको पनि भीड लाग्छ । ती बाबाले अश्लीलता फैल्याए भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि भएको छ । शिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिमा नागाबाबा आउनैपर्ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यता के छ ? के यसलाई निरन्तरता दिनैपर्ने हो वा हटाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा बहस चल्ने गरेको छ ।
फागुन कृष्ण एकादशी अर्थात् विजया एकादशीका दिनदेखि नागाबाबा पशुपति मन्दिरभित्र छिर्न पाउँछन् । फागुन कृष्णऔंसीका दिनपछि मन्दिरभित्र नागाबाबा बस्न पाउँदैनन् । नागाबाबा पशुपति मन्दिर छिर्नुअघि कपडा लगाएर छिर्नुपर्ने र निस्कँदा पनि कपडा लगाएरै बाहिरिनुपर्ने नियम रहेको संस्कृतिविद् एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डन बताउँछन् ।
नागाबाबाका नाममा मोटरभित्र पहेंला कपडा लगाएर बीचमा एउटा नांगो मान्छे राखेर ठग्दै हिँड्नेदेखि बच्नुपर्ने डा. टण्डनको भनाइ छ । ‘आइतबार हेटौंडामा एक बाबाले नागा हुँ भन्दै चिया खान रु एक हजार मागे मैले दिएँ, पछि मुक्तिनाथ जाने खर्च मागे । बाबाले यसरी माग्दै हिँड्छन् भनेपछि पशुपति जान पेट्रोल हाल्न भने यस्ता मान्छेदेखि बच्नुपर्छ’–आफैंले भोगेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने ।
‘शिवरात्रिमा सीमापारबाट पैसा खर्च गरी नेपालमा नागाबाबा ल्याएर अश्लीलता प्रदर्शन गर्दा महिला तथा बालबालिकामा गम्भीर मानसिक असर पर्छ, यो नेपालको संविधानविपरीत कार्य भएको हुँदा रोक्नु जरुरी छ’–रिटमा उल्लेख छ । शिवरात्रिका अवसरमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागाबाबालाई गुठी संस्थानले सीमाबाट नै सत्कारसहित पशुपति ल्याउने गरेको छ । प्राचीनकालदेखि सुरु भएको यो परम्परालाई जंगबहादुरका छोरा जगतजंगले जगनन्द प्रकाशेश्वर गुठी स्थापना गरी खर्चको व्यवस्था गरिदिएको संस्थानका उपप्रशासक दीपकबहादुर पाण्डे बताउँछन् ।
राणाकालमा नागाबाबा पैदल हिँडेर आउन सहज होस् भनी हेटौंडाको कर्राखोला, आर्यघाटको फलामेपुलसमेत निर्माण गरिएको संस्थानले जनाएको छ । धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतम जटा पाल्ने, रुद्राक्ष लगाउनेजस्तै नागाबाबा पनि शिव अवतारको एकरुप भएको बताउँछन् ।
संस्थानले २०६२ सालसम्म नागाबाबालाई लगाउन बाघ, मृग आदि वन्यजन्तुको छाला बाँड्थ्यो । वन्यजन्तु ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (साइटीस)मा सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि बाँड्न छोडिएको हो । त्यसअघि, वन्यजन्तुका छाला बाबालाई बाँड्न दरबारले उपलब्ध गराउने गरेको संस्थानले जनाएको छ । वि.सं. २०५८ देखि संस्थानले शिवरात्रिका अवसरमा गाँजा, चरेसलगायत लागुपदार्थ वितरण पनि बन्द गरेको थियो ।
शिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिमा साधु–सन्तका नाममा अनेकथरि बाबा आउँछन् । गाँजा, भाङ, धतुरो, चरेसजस्ता लागुपदार्थको खुलारुपमा सेवन एवं बेचबिखन हुने गरेको छ । यस वर्षदेखि कोषले पशुपति क्षेत्रमा कुनै किसिमका लागुपदार्थ सेवन एवं बेचबिखन गर्न कडाइ गरेको छ । दैनिक सुरक्षागस्ती गरी लागुपदार्थ सेवन एवं बेचबिखन गर्नेलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले जनाएको छ ।